Kutya Kubva Mugungwa Kunopinda Mukuvhunduka 'Imba YeMahombekombe'
musha Horror Varaidzo Nhau Kutya Kubva Mugungwa Kunopinda Mukuvhunduka 'Imba YeMahombekombe'
by Timothy Rawles July 6, 2020 1,333 maonero
Kubvunda kwave kupa vanyori vanopa zvakawanda zvemukati zvemukati panguva yedenda uye vhiki rino hazvisi izvo. Iyo inotyisa inoyerera yakagadzirirwa kusunungura Imba yeMahara panaJuly 9.
Mune ino creeper yezvakatipoteredza, tinowana Emily naRandall vachitora rwendo kuenda kunzvimbo yemhuri yake yemahombekombe egungwa:
“Rwendo rwavo rwekusaenda kumwaka rwakakanganiswa naMitch naJane Turner, vaviri vakura vanoziva baba vaRandall vakaparadzana. Zvisungo zvisingatarisirwi zvinoumbwa apo vaviri vacho vanoregedza uye vanonakidzwa nekuzviparadzanisa, asi zvese zvinotora shanduko inotyisa sekuwedzera kwechiitiko chezviitiko zvakatenderedza zvinotanga kurwisa manheru avo erunyararo. Sezvo zvinoonekwa nehutachiona zvinova pachena, Emily anotambudzika kuti anzwisise kutapuriranwa nguva isati yakwana. ”
Turera, iyo inotevera pazasi, ine kunzwa kwevaviri The Thing uye Kurwiswa kweMutumbi Vanodzika.
Director Jeffrey A. Brown ane mamiriro ekutsvaga nzvimbo uye akashandisa hunyanzvi hwekumisikidza mamiriro Imba yeMahara. Zvakare, aida kugadzira firimu raipemberera kushandiswa kweCronenburg kwekutyisa muviri, aine kamutsetse kaJohn Carpenter, "uye ne cosmism nihilism yenyaya dzeHP Lovecraft."
Brown anoti mune chirevo nezve iyo firimu:
“Imba yeBeach ndeyekuedza kuita hurukuro yakanangana, yakatendeseka nevateereri. Ini ndaida kutora zvandainzwa kushayikwa kubva kune anotyisa mafirimu uye jekiseni izvo muchinyorwa uye chirongwa chekugadzira. Kunetseka kwangu pamusoro pekutanga kweapocalypse yezvakatipoteredza kwakapa mota kutyisa, nepo kufarira kwesainzi yekushanduka-shanduka kwakave chinhu chinonyanya kukosha chenyaya. "
Imba yeMahara anosvika paShudder Chikunguru 9.